မေ့မရသောအလွမ်း - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
စာရေးသူက ငယ်ငယ်က ဝါသနာရှင် တစ်ယောက်ပေါ့..။ အချောင်းကောင်း၍ ဖရီးစားရသောအခါများလည်း ကြုံဖူးပါသည်..။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးက (၁၉၉၆) လောက်က အတွေ့အကြုံလေးကို အခြေခံပါသည်… ..။ အခုခေတ်က တိုက်ခန်းတွေများ၍ ချောင်းဖို့က သိပ်မလွယ်တော့ပေ…။
လှိုင်သာယာမြို့သစ် စပေါ်ပီးနောက် မြို့သစ်အစွန်းပိုင်းများတွင် တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စားများ စုပြီးနေကြသော ရပ်ကွက် တစ်ခုရှိသည်. .။ ပေ ၂ဝ ကို တစ်အိမ် ဆောက်နေကြတဲ့ အချိန်ပေါ့ဗျာ..။ အိမ်ရှင်အများစုက ဆယ်ပေတစ်ခြမ်းကို ထရံကာပြီး ငှါးစားကြသည့်အချိန်ပေါ့..။
မင်းမင်း … နယ်ကတက်လာပြီး ရန်ကုန်မှ အသိတစ်ယောက်ဆီမှာ တည်းခိုရင်း အလုပ်ရှာသည်..။ လှိုင်သာယာက စက်ရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်ရ၍.. အလုပ်နှင့်နီးသော ထိုရပ်ကွက်တွင် အိမ်ငှါးနေရန် ရှာရပါတော့သည်။ အကျဥ်းချုပ် ပြောရရင်တော့.. ဆယ်ပေခန်းလေး ရတာပေါ့ဗျာ..။
ခေါင်းရင်းခန်းအိမ်ငှါးနေတဲ့ လင်မယားက.. ကလေး မရှိကြသေး..။ မင်းမင်းက ခြေရင်းခန်းမှာနေသည်..။ ကိုကျော်ကြီးနှင့် မထားက လင်မယား..။ ကျော်ကြီးမှာ ကားစပါယ်ယာဖြစ်သည်..။ မထားမှာ မင်းမင်းနှင့် တစက်ရုံတည်း အတူအလုပ်လုပ်ကြ၍ မင်းမင်းနှင့် သိကြကာ သူတို့ခြေရင်ခန်း ငှါးမည်ဟု အိမ်ရှင်က ပြောသဖြင့် မင်းမင်းငှါးနေရန် အဆင်ပြေသွားလေသည်…။
အလုပ်ဆင်းချိန် လိုင်းကားစီးလျှင် မထားနှင့် မင်းမင်း ဆုံတတ်ကြသည်..။ မထားမှာ လင်ရှိပေမဲ့.. အပျိုအတိုင်းပင်..။ သင်ဇာဝင့်ကျော်လို ကိုယ်အနေအထားမျိုး.. အသားအရည် ဝင်းဝါသည်။ နှာတံသွယ် မျက်နှာဝိုင်းလေးနှင့် ကြည့်ကောင်းလှသည်..။
သူမကို စသိချိန်က အပျိုထင်၍ မင်းမင်း.. စကားဝင်ရော မိတ်ဆက်ပြီး ခင်အောင်လုပ်ခဲ့သည်..။ လင်ရှိသည်ဟု သိရ၍.. အနေအထိုင် ဆင်ခြင်လိုက်ရသည်..။ အခုတော့ တစ်အိမ်တည်းမှာ တစ်ခြမ်းစီ နေကြသဖြင့် မင်းမင်း ကျေနပ်နေမိသည်…။
အိမ်ပုံစံက သစ်သားအိမ်၊ အလည်က ထရံတောက်လျှောက် ကာထားသည်..။ ရေချိုးလျှင် နောက်ဖေးမှာ ချိုးကြသည်..။ အိမ်ရှေ့ခန်း အိပ်ခန်းရှိပြီး မီးဖိုချောင်မရှိပါ..။ အိမ်သာမှာ တစ်ခုတည်း ရှိသည်..။ ထမင်းဟင်းချက်လျှင် ရေကပြင်မှာပဲ ချက်ကြပြီး.. ရေချိုးနေရာနှင့် အိမ်သာမှာ ဆယ်ပေလောက်သာ ကွာသည်…။
မင်းမင်း ထိုအိမ်မှာ စနေတဲ့နေ့ ချောင်းဂွင်ရလေသည်..။ နောက်ဖေးမှ ရေချိုးသံ ကြားလိုက်ရသည်..။ မင်းမင်း အိပ်နေရင်း ထရံကြားမှ ချောင်းလိုက်ရာ မထား ဖြစ်နေသည်..။ ရေဆေးငါးကြီးလို.. ဝင်းပြောင်နေသည့် ရေစိုထမိန်ကြောင့် တင်းရင်းနေတဲ့ တင်သားကြီးကြားကို ထမိန်အပြင်မှနေ၍ ပွတ်တိုက်နေသည်..။
ဖင်ကြားညပ်ပုံစံကြောင့် မင်းမင်း လီးထတောင်လေသည်..။ ထမိန်ပြန်ပြင်၍ဝတ်ဖို့ ခါလိုက်ရာ.. ဘေးတိုက်မြင်ရသော မြင်ကွင်း.. ကောက်ကြောင်း.. နို့သားမှာလုံးပြီး အပေါ်ဘက် ကော့တက်နေသည်..။ ဆီးခုံနှင့်ဗိုက် တသားတည်း.. တင်လေးက ကောက်လို့ လှနေသည်..။
မထားလင် ကျော်ကြီးမှာ စပယ်ယာဖြစ်၍ အစောကြီး အလုပ်ထသွားရသည်..။ တနင်္ဂနွေ တစ်ရက်ပဲ နားလေသည်..။ အခု ကျော်ကြီးမရှိ အလွတ်ချောင်းလို့ရပေပြီ..။ သူမ ရေချိုးပြီး အဝတ်လဲဖို့ လုပ်နေသည်..။ မင်းမင်း အခန်းဘက်မှာ ပြတင်းပေါက် မရှိ၍ အမှောင်ခန်းလို ဖြစ်နေသည်..။ မထားအခန်းမှာ ပြတင်းပေါက် ဖွင့်ထား၍ မနက်အလင်းအောက်မှာ ပေါ်တင်ကြီး မြင်ရသည်..။
သူမ ထမိန်ချွတ်ချလိုက်ရာ စောက်မွှေးယေးယေးနှင့် အဖုတ်ကို မြင်ရသည်..။ အလုပ်သွား အဝတ်ကို ကုန်းယူလိုက်စဉ် ဖင်နောက်မှ ပြူးထွက်လာသော အဖုတ်နောက်ပိုင်းနှင့် အညိုရောင်ခရေပွင့် စအိုလေးမှာ လိုးချင်စရာပေ..။ တင်သားကြီးများမှာ ပြတင်းအလင်းရောင်ကြောင့် တင်းပြောင်နေသည်..။ မထား အသားအရည်မှာ ဝါညက်ညက်နှင့် အင်မတန် အိစက်နေမှာ ဖြစ်သည်..။ ဒီလိုဖင်နှင့် အဖုတ်ကို ရထားသော ကျော်ကြီး ဘယ်လိုများ လိုးမလည်း ကြည့်ချင်လာမိသည်..။
မင်းမင်းလည်း အလုပ်သွားရမည်..။ မနက်ခင်း ဂွင်းထုလျှင် အလုပ်မလုပ်နိုင်မှာစိုး၍ စိတ်လျှော့လိုက်ပြီး အလုပ်သွားရန် ပြင်ရပါတော့သည်…။
ကားမှတ်တိုင်တွင် အလုပ်သွားမည့်သူများ အုံခဲနေသည်..။ ကားက မလာသေး..။ ထိုလူအုပ်တွင် မိန်းကလေးများ ပိုများသည်။ အထည်ချုပ်စက်ရုံနှင့် နီးသောကြောင့် ဖြစ်သည်..။ ထိုခေတ်က ဝိုင်ဘီအက် ဟီးနိုးကားများ မရှိသေးပါ..။ ချက်ကြီးခေါ် ဘက်စ်များသာ ရှိသည်..။ ကားအလွန်ကြပ်သဖြင့် မိန်းကလေးများအတွက် အဆင်မပြေပေမဲ့ ယောက်ျားများအတွက် သာယာလေသည်..။ ထောက်ဂွင် ဖြစ်သည်..။
မထား နှင့် မင်းမင်းမှာ ဘေးချင်းကပ် ရပ်နေကြသည်..။ ဘက်စ်ကား ရောက်လာသည်.. ကြပ်နေသည်.. အလုအယက် ဝိုင်းတက်ကြသည်..။
“မထား မြန်မြန်လာ အလုပ်နောက်ကျမယ်”
မင်းမင်းအရှေ့မှ တိုးဝှေးတက်သွားသည်။ မထား အနောက်က ကပ်တိုးလိုက်လာသည်..။ အလည်လောက်တွင် တိုးမရတော့ပါ..။ မထားရဲ့ နို့နှစ်လုံးမှာ.. မင်းမင်းကျောကုန်းကို လာဖိမိနေသည်..။ ကားလှုပ်တိုင်း နို့နှင့်ကျော ပွတ်နေရတာ ဖီးကောင်းလွန်းသည်..။ ဆင်းဖို့မှတ်တိုင် နီးလာသဖြင့် မထားဆင်းဖို့ တဖက်လှည့်လိုက်သည်။
မင်းမင်းလည်း လိုက်လှည့်သဖြင့်.. ဖင်ကွဲကြားနှင့် လီး ထောက်မိတော့သည်..။ ရေချိုးပြီး မြင်ထားသော ဖင်ကြီးကို ထောက်မိနေသလို နို့နဲ့အပွတ်ခံရ၍.. လီးက အတွင်းခံထဲမှာ မာတင်းနေသည်…။ မတတ်နိုင်ဘူး ကားကြပ်တာကိုး…။ အရှေ့မှ မထား ငြိမ်နေသည်..။ မင်းမင်း ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ် လီးကို ဖင်နဲ့ အကြိမ်းထောက်လိုက်ရာ သုတ်ရည်များပင် ထွက်နေတော့သည်…။
မင်းမင်း ထောက်နေတာ မထား သိပါသည်..။ ကားကြပ်နေတော့ အပြစ်ပြောမရသလို.. တစ်အိမ်ထဲ အတူနေသောသူဖြစ်၍ နားလည်ပေးလိုက်သည်…။ မထား ကာမအရသာကို ကြိုက်သည်..။ လင်ဖြစ်သူမှာ စပါယ်ယာဖြစ်၍ ပြန်ရင်ပင်ပန်းသည်ဟုဆိုကာ.. အရက်ကလေးသောက်လာပြီး တန်းအိပ်တတ်သည်…။ အိမ်ထောက်သက် တစ်နှစ်ကျော်သာ ရှိသေးသည်..။ ညားခါစကလို ကျော်ကြီး မလိုးနိုင်တော့ပါ..။
မထား လီးငတ်နေတာ ကြာပါပြီ..။ တစ်ပတ်တစ်ခါသာ အလိုးခံရ၍ အားမရနိုင်ပါ..။ တခါတလေ ညဘက် လင်အိပ်နေချိန် လက်ချောင်းများသွင်း၍ အာသာဖြေနေရသည်..။ အခုလည်း ဖင်ကြားထဲက ပူပူနွေးနွေး လီးကို အလိုးခံချင်နေသည်…။
“မထား တိုးတော့ ရောက်ပြီ”
မင်းမင်း သူမပုခုံးလေးကို လှုပ်ပြောတော့မှ.. တိုးဖို့ သတိရတော့သည်…။ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ဘေးကပ်လမ်းလျှောက်နေစဉ်..
“မထား နင်က တကယ့် အပျိုအတိုင်းပဲနော်.. ကလေးမယူဘူးလား”
မထား ပြန်မဖြေ ခေါင်းငုံ့လျှောက်နေသည်။ မင်းမင်း စိတ်မလုံ ဖြစ်သွားသည်။ သူလီးထောက်တာ စိတ်ဆိုးသွားပြီထင်၍..
“မထား ငါ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါဟာ.. ကားကြပ်လို့ ထောက်မိတာပါ..”
နှစ်ယောက်သား ဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲ ခပ်ခွာခွာ အလုပ်ဆက်သွားကြတော့သည်…။
မထား တစ်နေ့လုံး အလုပ်လုပ်၍ မရပါ..။ မင်းမင်းနှင့် အလုပ်ထဲ တခါတလေ တွေ့မိလျှင် ကားပေါ်က အဖြစ်ကို ပြန်သတိရပြီး ပေါင်ကြားထဲ ယားနေသလို ခံစားနေရသည်..။ အလုပ်အိမ်သာထဲ သေးပေါက်သွားလျှင် အစိလေးကိုပွတ်၍ ခဏလောက်ကစားပြီး.. ကာမစိတ် နိုးထနေတတ်သည်…။ ဒီနေ့ညတော့ ယောက်ျားကို လိုးခိုင်းဖို့ တွေးနေမိလေသည်…။
ထိုခေတ်အချိန်သည် အပြာဗီဒီယိုများ အလွယ်တကူ ကြည့်လို့မရပေ။ ခက်ခဲသော ကာလဖြစ်သည်..။ အပြာစာအုပ်နှင့် အပြာကာတွန်းများသာ ခက်ခက်ခဲခဲ ဝယ်ဖတ်ကြရသည်..။
မင်းမင်း မထားဖင်နှင့် စဖုတ်ကိုသာ မြင်ယောင်နေမိ၍ လီးလည်း တောင်နေသည်..။ ဖတ်ဖူးသော အပြာစာများအတွင်းမှ လိုးနည်းများကို ပြန်မြင်ယောင်ပြီး မထားကို လိုးဖို့ အကြံထုတ်နေမိသည်..။
အလုပ်ပြန်ချိန် ရောက်လေပြီ..။ ထုံးစံအတိုင်း ကားကြပ်ကြပ် တိုးစီးပြန်ရ၍ မထားများ ရှိနေမလား.. ရှာကြည့်သေးသည်..။ မတွေ့ပါ.. ဘယ်အချိန်ပြန်သည် မသိလိုက်.. ။
စနေနေ့မို့ မထား စောစောပြန်သွားသည်။ လင်တော်မောင် စပါယ်ယာကျော်ကြီး အလုပ်အစော ပြန်တတ်သည်..။ မင်းမင်း အိမ်ပြန်မရောက်ခင် စောစောခံချင်လို့ ဖြစ်သည်..။ မထား တွေးမိပါသည်..။ ခြေရင်းခန်းမှာ ပြတင်းပေါက် မရှိပေ..။ အိမ်ရှေ့ခန်းနှင့် နောက်ဖေးခန်း ထရံကာခွဲထား၍ မီးမထွန်းလျှင် မှောင်နေတတ်သည်..။
မင်းမင်းအိပ်ခန်းနှင့် သူတို့အိပ်ခန်းမှာ ထရံတစ်ချပ်သာ ခြားသည်..။ ချောင်းကြည့်လျင် မြင်နိုင်သည်..။ ထို့ကြောင့် စက္ကူများ သတင်းစာများ ကပ်ထားရသည်..။ ယခု သူမ အိမ်အရင်ဆုံးရောက်သည်။ လင်တော်မောင်က မရောက်သေး။ မင်းမင်းလည်း ပြန်မလာသေး..။ ထို့ကြောင့် သူမအဝတ်လဲရင်း သတင်းစာလွတ်နေသော နေရာတချို့မှ ခြေရင်းခန်းကို ချောင်းကြည့်လိုက်သည်..။ မင်းမင်း အိပ်ယာနှင့် အဝတ်အစားများ တွေ့ရသည်..။ မင်းမင်းချောင်းလျှင် သူမကိုမြင်မှာ သေချာလေပြီ..။ “သူငါ့ကို ချောင်းသေးလား..” ဟု တွေးမိရင်း ရင်ခုန်နေမိသည်..။ ထိုစဉ် ကျော်ကြီး ပြန်ရောက်လာလေသည်..။
“ဟာ.. မိန်းမ အစောကြီး ရောက်နေပါလား”
“ဟုတ်တယ်.. ကိုကျော်.. အလုပ်နည်းလို့ ခွင့်တောင်းပြီး ပြန်လာတာ..”
မထား သူ့လင်ကို ဖက်လိုက်ပြီး..
“ကျမ ကလေးလိုချင်တယ်.. ရှင်ဒီနေ့ ကြိုးစားပေး..”
“အင်းပါ မိန်းမရယ်.. လာ အခုပဲစရအောင်”
ကျော်ကြီးနှင့် မထား အဝတ်များ ချွတ်ချလိုက်ပြီး အိပ်ယာပေါ် လှဲလိုက်သည်..။
“ရှင့် သုတ်ရည်ကို အပြင်မထုတ်နဲ့နော် ကလေးယူမယ်”
သူတို့လင်မယား ကွန်ဒုံးသုံးနေတာ ကြာပါပြီ။ ငွေကြေးမပြည့်စုံသေး၍ ကလေးမရအောင် သုံးချင်းဖြစ်သည်..။ မထား တားဆေး မသောက်ချင်ပါ။ ရာသီမလာလျှင် အသားအရည် မွဲခြောက်မှာစိုးလို့ ဖြစ်သည်..။ ကျော်ကြီးမှာ အိမ်ငှါးဘဝနှင့် ကလေးယူရမှာ တွေးပူနေမိသည်။ ထို့ကြောင့် လိုးတိုင်း ကွန်ဒုံးသုံးနေရ၍ စောက်ပတ်အရသာကို ကောင်းကောင်း မခံစားရ..။ မထားလည်း ထို့အတူပင်..။ သူမမှာ မပြီးခင် ယောက်ျားက ကွန်ဒုံးထဲမှာ ပြီးချသဖြင့် သုတ်အရသာကို မခံစားရပေ..။
ဒီနေ့ မထား အရမ်းထန်နေသည်..။ ပက်လက် ပေါင်ကားပေးလိုက်သည်..။ ကျော်ကြီး လီးမှာ ၅ လက်မလောက်သာ ရှိသည်။ တဆုံးထည့်လိုးမှသာ သားအိမ်နားထိ ရောက်သည်..။ မထားရဲ့ နို့ကလေးများကို ဆွဲစုပ်နေရင်း လီးကိုမသွင်းသေးပဲ စောက်ပတ် အပေါ်သို့ အမြောင်းလိုက်ပွတ်ရင်း လီးပိုတောင်အောင် လုပ်နေသည်..။
စပါယ်ယာအလုပ်မှာ ပင်ပန်းလှ၍.. လီးမှာ ချက်ချင်း မတောင်နိုင်ပါ..။ လိုးချင်သော်လည်း လီးက မလိုက်နိုင် ဖြစ်နေသည်..။
“မိန်းမ.. စုပ်ပေးဟာ.. မတောင်နိုင်ဘူး..”
ကျော်ကြီး ပက်လက်လှန်လိုက်သည်..။ မထား သက်ပြင်းချလျက် ထလိုက်၍ ကျော်ကြီးပေါင်ကြား ဒူးထောက်ထိုင်ကာ လီးကိုအရင် ဂွင်းကစားလိုက်သည်..။
“ရှင် အားဆေး သုံးသင့်တယ်..”
“အေး.. ငါဝယ်ဖို့ မေ့နေတာ.. စုပ်ပါတော့ဟာ.. အာ့မှ ထောင်လာမှာ..”
မထား ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ကာ စုပ်ပါတော့သည်..။
“အင်း.. ကောင်းတယ် မိန်းမရေ..”
မထား လျှာကလေးနှင့် လီးဒစ်လေးကို မွေ့ကစားလိုက်ရာ လီးမှာ ထောင်လာတော့သည်..။ မထား မအားနိုင်တော့ပါ။ ဘယ်လက်က လီးကိုကိုင်၍ စုပ်နေပြီး.. ညာလက်က ဗိုက်အောက်လျှို၍ လက်ချောင်းများက အဖုတ်ထဲ ထည့်လိုက် ထုတ်လိုက် ကစားနေတော့သည်…။
“အွင်း.. အ့.. ပြွစ်ပြွစ်.. ရှီး… အ့..”
မင်းမင်း အိမ်ပြန်ရောက်လာသည်..။ မထားအိမ်ရှေ့ဘက်ကြည့်တော့ ယောက်ျားဖိနပ်တွေ့ရ၍ ကျော်ကြီး ရောက်နေတာ သိလိုက်သည်..။ မိမိအိပ်ခန်းထဲဝင်၍ လှဲလျှောင်း အနားယူလိုက်သည်..။ ကြမ်းတပြေးတည်း ဖြစ်နေ၍ တဖက်ခန်းမှ ငြီးသံလိုလို ကြားရသဖြင့် ချောင်းလိုက်ရာ..
အပြာကား မကြည့်ရတာ ကြာပြီဖြစ်သော မင်းမင်း.. ထီပေါက်လေသည်..။ ပြတင်းပေါက်ဘက် ခေါင်းထားကာ သူချောင်းသည့်ဘက် ခြေဆင်းထားသော ကျော်ကြီးနှင့် ဖင်ဖွေးဖွေးကြီးနှင့် ပုလွေပေးသော မထား.. လက်ချောင်းသွယ်သွယ်လေးများက စောက်ပတ်ထဲ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နှင့် အရည်ဖြူလေးများပင် ထွက်နေလေသည်..။ ဒူးကားပြီး ဖင်ကုန်းထားခြင်းကြောင့် နို့နှစ်လုံးတင်းတင်းကိုပါ မြင်နေရသည်..။ ထရံ၏ အောက်ခြေမှာ သတင်းစာလွတ်သဖြင့် ချောင်းရ အဆင်ပြေသည်..။
မင်းမင်း ပုဆိုးချွတ်ပြီး ဖင်ကုန်းချောင်းရင်း.. လီးကိုခြေမှပင့်ကာ ဂွင်းတိုက်တော့သည်..။ မထား.. လီးစုပ်နေရင်း တဖက်ခန်းမှ ခြေသံကို ကြားရသည်..။ မင်းမင်း ပြန်လာတာကို သိသည်..။ လီးကို အားပိုသုံး၍ စုပ်လိုက်သည်..။
ကျော်ကြီး အသံထွက်ပိုကျယ်၍ မင်းမင်း ကြားနိုင်သည်ဟု ထင်လိုက်သည်..။
“မိန်းမ အပေါ်က ဆောင့်ဟာ.. အရမ်းထန်နေပြီ”
မထား လီးစုပ်တာရပ်ပြီး.. ခြေရင်းဘက်လှည့်၍.. လီးကိုကိုင် အဖုတ်ဝတေ့၍ ဆောင့်ချတော့သည်..။ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများမှာ ပြဲလန်မနေပါ ဖောင်းဖောင်းလေးနှင့် စိကပ်နေသည်..။ ပေါင်နှစ်လုံးကိုဖြဲရင်း ဆောင့်သလို.. လက်များက နို့ကိုပွတ်ချေနေလိုက်သည်..။ သူမမျက်လုံးများ ထရံဘက်ကို ကြည့်ရင်း..
“အ့.. အ့.. ရှီး.. ကိုကျော် အောက်ကပင့်လိုးပါ.. အား.. ကောင်းတယ်..”
လိုးပွဲကြည့်ကောင်းနေသော မင်းမင်း.. ၇ လက်မခန့် လီးကြီးကို ဂွင်းအဆက်မပြတ် တိုက်နေပြန်သည်..။ မထား မျက်လုံးများက သူဘက်ကြည့်နေ၍ ချောင်းတာ သိပုံရနေသည်..။ မထား သူ့ဘက်မျက်နှာမူပြီး ကုန်းလိုက်ပြန်သည်..။ ကျောသားဖွေးဖွေးနှင့် ဖင်ကားထားရာ.. ကျော်ကြီး အနောက်မှ မထားရဲ့ ခါးကိုကိုင်ပြီး လိုးပါတော့သည်..။ နို့သားအိအိကြီးများလည်း ခါရမ်းနေတော့သည်..။
မထား ထောက်ထားသော လက်ကို ကွေးချလိုက်ပြီး ကြမ်းပြင်နှင့် ကပ်လိုက်ရာ မင်းမင်း ချောင်းကြည့်ပေါက်နှင့် တတန်းထဲ ဖြစ်သွားတော့သည်..။ ရမက်ထန်သော မျက်လုံးများနှင့် မထားမှာ တအအ အော်နေရင်း လျှာလေးပင် အနည်းငယ် ထွက်နေသည်..။ နှုတ်ခမ်းပါးပါးလေးနှင့် သွားဖွေးဖွေးကြောင့် မင်းမင်းမှာ အစုပ်ခံရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလည်း တွေးနေမိသည်..။
ကျော်ကြီး မျက်စိမှိတ်အံကြိတ်ပြီး အဆက်မပြတ် လိုးနေရာ သိပ်မကြာခင် လရည်များ ထွက်ကုန်သည်.။ မထား မပြီးသေးပါ ကျော်ကြီးက ပြီးသွားသည်..။
“မိန်းမရေ.. သုတ်ရည်တွေ ထည့်လိုက်ပြီနော် ကောင်းလား..”
“အင်း.. ကောင်းတယ်.. ထပ်လုပ်ပေးပါ”
“ခဏ အနားယူမယ်.. ညကျရင် ထပ်လုပ်မယ် ဟုတ်ပြီလား”
မထား အာသာမပြေပါ။ မျက်နှာလေး ညှိုးသွားသည်..။ မင်းမင်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားရသည်..။ မထားစိတ်တိုင်းကျ လိုးပေးချင်မိသည်…။ မိမိလည်း ထုလို့ မပြီးသေးပါ..။ ကျော်ကြီးက အပြီးမြန်၍ ပွဲက ရပ်သွားရသည်…။ အပြာကားကြည့်ရင်း မီးပျက်သွားသလို ခံစားနေရသည်..။
ကျော်ကြီး လီးတန်းလန်းနှင့် ပက်လက်အနားယူလိုက်ရာ ခဏအကြာ ဟောက်သံပေး၍ အိပ်ပျော်သွားသည်..။ မထားလည်း ထမိန်ရင်လျှားဝတ်၍ နောက်ဖေးထွက်သွားတာ တွေ့လိုက်ရသည်။ မင်းမင်း ပုဆိုးပြန်ဝတ်လိုက်သည်..။ ထို့နောက် နောက်ဖေးသို့ ထမင်းချက်ရန် ဟန်ဆောင်ကာ ထွက်လာလိုက်သည်..။
ရေကပြင်အောက် ရေချိုးနေရာမှာ မထားထိုင်ပြီး ရေချိုးရန် ပြင်နေစဉ်..
“ဟာ မထား အလုပ်အစောကြီး ပြန်တာလား”
“ဟုတ်တယ် မင်းမင်းရေ.. စျေးဝယ်စရာလေးရှိလို့ ပြန်လာတာ”
“ကျနော်လည်း ထမင်းချက်ပြီး စျေးဝယ်ရဦးမယ်”
မင်းမင်း ပုဆိုးတိုတို ဝတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ငုတ်တုတ်ထိုင်လျှင် အောက်စလွတ်အောင် တမင်လုပ်လိုက်သည်..။ နောက်ဖေး ထမင်းချက်ရာ နေရာမှာ တစ်ခုတည်းဖြစ်ပြီး သူ့မီးဖိုကိုယ့်မီးဖိုနှင့် ချက်ကြသည်..။ မီးဖိုနေရာနှင့် ရေချိုးရာ နေရာမှာ အထက်အောက် ဖြစ်သည်..။ မထား ရေချိုးနေရာမှကြည့်လျင် ဒဲ့မြင်ရသည်..။
မင်းမင်း ငုတ်တုတ်ထိုင် မီးဖိုပြာများ ရှင်းနေရင်း အောက်စလွတ်တာ မထား မြင်နေရသည်..။ လီးမှာ ထောင်မတ်နေပြီး အမွေးများမရှိ၍ ရိတ်ထားပုံထင်ရသည်..။ မင်းမင်းမှာ မထား၏ ရေစိုကိုယ်လုံးအလှကြောင့် လီးတောင်နေပြီး လိုးပွဲကြည့်ထား၍ အရှိန်က မကျသေးပေ..။ လရည်ကြည်လေးများပင် ထွက်နေသည်…။
၇ လက်မ ကျော်ရှည်သော လီးမှာ ငရုတ်ကျည်ပွေ့အရွယ်ရှိပြီး လီးထိပ်မှာ ဒစ်လန်နေ၍ ထိပ်ဖူးကြီးမှာ ပန်းရောင်ထနေသည်..။ မထား ခိုးကြည့်နေရင်း ခံတွင်းခြောက်လာမိသည်..။ ရင်ထဲ တလှပ်လှပ်တုန်၍ ခံချင်စိတ် ပေါ်လာနေသည်..။ မြန်မာမိန်းကလေး ဖြစ်သည်က တကြောင်း၊ အိမ်ထောင်သည်မို့ ဖောက်ပြန်တယ်ထင်မှာ မခံနိုင် အထင်သေးမှာ စိုးနေပြန်သည်..။ ရေချိုးနေရာမှာ တစ်ခုတည်းဖြစ်၍ မထားပြီးလျင် သူရေချိုးရဦးမည်..။
“ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ.. အဝတ်အစားလေး ဝယ်မလို့ပါ”
“ငါ ရေချိုးပြီးရင်သွားမှာ.. နင်လိုက်မလား”
မင်းမင်း ပျော်သွားသည်..။ အခွင့်အရေး ရလေပြီ..။
“လိုက်မယ်လေ.. ရေချိုးပြီးရင် သွားကြတာပေါ့”
မထား ရေချိုး သနပ်ခါးလိမ်း အဝတ်လည်းပြီး.. အိပ်ပျော်နေသော လင်တော်မောင် ကျော်ကြီးကိုနှိုး၍..
“ကိုကျော် ထဦးလေ.. ကျမ စျေးသွားမလို့ ရှင်ရော ဘယ်သွားမှာလဲ”
“ငါလည်း မနက်ဖြန် အလုပ်နားတယ်.. အရက်ဆိုင် သွားလိုက်ဦးမယ်”
“အရမ်းမမူးနဲ့နော်.. ရှင်ညကျရင် ထပ်လုပ်မယ် ကတိပေးထားတာ မမေ့နဲ့”
ကျော်ကြီး မထားပါးလေးကို နမ်းလိုက်ပြီး..
“အေးပါ မိန်းမရယ် နင်ကလေးလိုချင်တာ သိပါတယ်.. ငါကတိပေးတယ်.. အိုကေလား”
ကျော်ကြီးမှာ ရိုးရိုးအေးအေးသမားဖြစ်သည်။ သူ့မိန်းမ ထန်နေတာ မသိရှာပေ..။ အရက်ကိုတော့ ကြိုက်သည်။ အသိမိတ်ဆွေတွေ့လျင် အမူးလွန်အောင် သောက်တတ်၍ တခါတလေ အိမ်ပြန်ရောက်တာတောင် မသိပေ။
မထား ပိုက်ဆံအိတ်ဆွဲယူပြီး.. အပြင်ထွက်တော့သည်..။ မင်းမင်း အိမ်ခန်းရှေ့ ကြည့်လိုက်ရာ ဖိနပ်မတွေ့ရ၍ ထွက်သွားတာ သိလိုက်သည်..။
“အဲ့ကောင် လိုက်မယ်ပြောပြီး ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်”
အမှန်တော့ မင်းမင်း ကားမှတ်တိုင်ကို ကြိုရောက်နေသည်..။ အိမ်ကအတူထွက်လျှင် ကျော်ကြီး တမျိုးထင်မှာစိုး၍ ရှောင်လွှဲထွက်ခြင်း ဖြစ်သည်..။ မှတ်တိုင်ခုံလေးမှာ ထိုင်နေသော မင်းမင်းကို တွေ့လိုက်ရသည့် မထား ပျော်သွားမိသည်..။
“ဟဲ့ နင်က ကြိုစောင့်နေတာလား”
“ဟုတ်တယ် အစ်မရေ.. အတူထွက်ရင် မသင့်တော်လို့ပါ”
မထား နားလည်လိုက်သည်။ မင်းမင်းဟာ အခြေအနေကို နားလည်တတ်၍ မိတ်ဆွေကောင်း ဖြစ်နိုင်သည်..။ ထိုစဉ် ဘတ်စ်ကား ရောက်လာသဖြင့် စျေးသို့ ထွက်ခွာကြတော့သည်..။
မိုးချုပ်စပြုနေလေပြီ..။ စျေးအတွင်း စည်ကားလွန်းလှသည်..။ ညစျေးတစ်ခုလို ဖြစ်နေ၍ အလုပ်နားချိန် စျေးဝယ်သူများ စည်းကားသိုက်မြိုက် နေလေသည်..။ မထားနှင့် မင်းမင်း.. အတူတွဲသွား၍ အလွန်ခင်မင်သော မိတ်ဆွေများပမာ ဖြစ်လာသည်..။ လိုအပ်သောပစ္စည်းများ ဝယ်ကြပြီး ပြန်ကြသည်..။
ညမိုးချုပ်ပြီ ဖြစ်သည်..။ လိုင်းကားမှာ မြို့ထဲမှ အပြန်ဖြစ်၍ အလုပ်ပြန်သူများနှင့် ကြပ်နေပြန်သည်..။ မင်းမင်းနှင့် မထား တိုးစီးရပြန်သည်..။ မင်းမင်း ထိုဂွင်ကိုသိ၍ အတွင်းခံဘောင်းဘီ မဝတ်ခဲ့ပေ..။ အခု မထား သူ့ရှေ့မှာ ရပ်နေပြီး အပေါ်တန်းကိုင်ရန် ခက်ခဲနေသည်..။
“အစ်မ စျေးအိပ် ကျနော့ကိုပေးထား.. အပေါ်ကိုပဲ ရအောင်ကိုင်..”
မင်းမင်း လက်တဖက်က အိပ်ဆွဲပြီး တဖက်က အပေါ်တန်းကိုင်သည်။ မထားမှာ လက်နှစ်ဖက် မြောက်သော်လည် မမှီသေး။ ထို့ကြောင့် မင်းမင်းလက်မောင်းကို အားပြုကိုင်ရတော့သည်..။ ကျောသားအိအိလေးနှင့် ဆံပင်စုစည်းထားသောကြောင့် ပေါ်နေသော ဂုတ်သားလေးက မင်းမင်းကို ရာဂထန်စေလေသည်..။ အောက်မှ လီးစတောင်လာသည်..။ အတွင်းခံ မပါသောကြောင့် လီမှာတဖြောင့်ထဲ ဖြစ်လာပြီး မထား၏ တင်သားအိအိကြီးကို ထိုးနေမိသည်..။
“မထား ခွင့်လွှတ်နော် ကျနော် ဘောင်းဘီတို မဝတ်ခဲ့မိလို့ အခုလို ထိုးမိတာပါ”
အသံတိုးလေးနှင့် သူမနားနား ကပ်ပြောလိုက်သည်..။ မထား ခေါင်းလေးငြိမ့်ပြီး လီးနှင့်တင်သား နှစ်ခုကြား တည့်အောင် ချိန်ပေးလိုက်သည်..။ ထိုသို့မလုပ်လျှင် တင်သားကို ထိုးမိနေ၍ အနေအထားမမှန်ပဲ သူ့လီးထိပ် နာသွားလိမ့်မည်..။ မထား သိလိုက်သည်။ သူမ မင်းမင်းကို ခင်တာထက် ပိုမိနေပြီ…။ ကားအတွင်းလည်း မှောင်နေသဖြင့် မည်သူမျှ မမြင်နိုင်ပေ..။
“မထား.. ဒီဘက်လှည့်လိုက်ပါလား.. ဆံပင်က မျက်နှာနဲ့ပွတ်လို့ ယားနေတယ်..”
မထား မငြင်းပါ။ သူ့ဘက် လှည့်လာသည်..။ မျက်ဝန်းချင်း ဆုံမိကြသည်..။ မထား မျက်ဝန်းလေးမှာ ဝိုင်းဝိုင်းလေးမို့ ချစ်ဖို့ကောင်းလှသည်..။ မင်းမင်း စိတ်မထိန်နိုင်တော့သဖြင့် သူမပါးလေးကို နမ်းလိုက်သည်..။ အခုတော့ လီးမှာ အဖုတ်နှင့် တတန်းထးတည်း ဖြစ်နေလျက် ပိုမိုမာတင်းလာသည်..။ ဆီးခုံကို လာထောက်နေသော လီးကို မထား အမြင်မတော်တော့ပါ..။ ထို့ကြောင့်.. သူမလက်တဖက်ကို အောက်ချပြီး လီးကို ပုဆိုးနှင့် ရောကိုင်၍ ဂွင်းထုပေးနေမိသည်…။
မထား သူ့ပုဆိုးကို အပေါ်သို့ မတင်၍.. လက်အတွင်းနှိုက်ကာ ခပ်သွက်သွက် ထုလိုက်တော့သည်..။ လီးမှာ တဆတ်ဆတ်တုန်းပြီး လရည်များ ပန်းထွက်လာ၏..။ ပေသွားသော လက်ကို ပုဆိုးအောက်ခြေနှင့် သုတ်လိုက်ပြီး ဘေးလူများမသိအောင် ပုံမှန်ပြန်နေလိုက်သည်..။
“အင်း.. ချစ်တယ် မထားရယ်.. လိုးချင်တယ်”
မထား မင်းမင်း ပါစပ်ကို ပိတ်လိုက်ပြီး..
ကားမှတ်တိုင် ဆင်းသာအခါ.. မထားအရင် အိမ်သို့ပြန်ပြီး.. မင်းမင်းမှာ ဆယ်ငါးမိနစ်လောက် လမ်းထိပ်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေလိုက်သည်…။ “ဒီညတော့ လိုးပါရစေ မထားရယ်…” လို့ စိတ်ထဲမှာ ရေရွတ်လိုက်မိသည်။
မထား အိမ်ရောက်သောအခါ လင်တော်ကျော်ကြီးမှာ မူးနေလေပြီ.. နှိုးလို့တောင်မရတော့..။ သူ့ကို စောင်လေးခြုံပေးလိုက်ပြီး.. နောက်ဖေးသို့ ထွက်ကာ မင်းမင်းအခန်းဘက်သို့ ကူးလိုက်လေသည်…။
မင်းမင်း အိမ်ထဲဝင်လာလေပြီ..။ စျေးဝယ်ထုတ်လေး ဘေးမှာချပြီး. အိပ်ခန်းထဲ ဝင်လိုက်ရာ.. သူ့အိပ်ယာထဲ မထား ရောက်နေသည်..။
“ရှူး… လာ.. လိုးချင်တယ်ဆို”
မထား အသံတိုးလေးနှင့် သူ့ကို ခေါ်နေသည်..။ မင်းမင်း ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်သည်..။ ထို့နောက် မထား၏ အဝတ်များကို ချွတ်ပေးလိုက်သည်..။ အမှောင်ညတစ်ခုလုံး တဖက်ခန်းမှ ကျော်ကြီးရဲ့ ဟောက်သံက ကြီးစိုးနေလေသည်..။ မထား၏ ပန်းနုရောင် နှုတ်ခမ်းလေးကို မင်းမင်း သူ့နှုတ်ခမ်းနှင့် ထိကပ်ပြီး လျှာအချင်းချင်း စုပ်နေကြသည်…။ လက်အသီးသီးမှာ သိုင်းဖက်ထားကြပြီး.. ခန္တာ ကိုယ်ချင်း ထိကပ်ပွတ်သပ်နေကြသည်..။
မွေ့ယာအပါးလေးပေါ်မှာ လှဲလိုက်ကြပြီး မထား၏ ဆီးခုံနှင့် အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများကို ဘာဂျာပေးတော့သည်..။ အရည်များစိုနေ၍ ဆပ်ပြာနံ့ကလေး သင်းနေသော စောက်ပတ်လေးကို မင်းမင်း မြိုချမတတ် ယက်နေတော့သည်..။ မထား ကောင်းလွန်း၍ အသံမထွက်နိုင်ပါ။ ခိုးစားခြင်းဖြစ်၍ အသံမထွက်ရဲ..။ ချစ်လင်ကျော်ကြီးကို ချစ်သလို.. မင်းမင်းကိုလည်း စွဲမိပြီ..။ အစုပ်အမှုတ် ကြမ်းသောကြောင့် သူမ အရည်ပန်းထွက်၍ ပြီးလေသည်…။
မင်းမင်းရဲ့ လီးကြီးကို မထား စုပ်ပြန်သည်..။ သိပ်မကြာပါ လရည်များ ပန်းထွက်လာ၍ မြိုချလိုက်သည်…။ မထား ကုန်းပေးပြန်သည်..။ နွေးအိနေသော စောက်ပတ် အထိအတွေ့ကြောင့် လီးမှာ မာကြောနေပြီး အဖုတ်အတွင်းသို့ အိခနဲ တိုးဝင်သွားလေသည်..။ စီးပိုင်နေသော အဖုတ်နှင့် ကြီးမားသော လီးကြောင့် ကာမအထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ပြန်သည်။
မင်းမင်း အနောက်မှနေ၍ နို့နှစ်လုံးကို လှမ်းဆွဲကာ ခွေးလိုးလေး လိုးတော့သည်…။ မထား ခါးလေးကော့၍ ပြန်ပြန်တွန်းပေးနေလေသည်…။
ပက်လက်ပုံစံ ပြောင်းလိုက်သည်…။ မထား၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ် တင်လိုက်သည်..။ အမှောင်ကြောင့် အဖုတ်ကို ကောင်းကောင်းမမြင်ရ..။ မင်းမင်းလီး စအိုကို ထောက်မိသည်..။ ဖင်လိုးရန် အကြံရလိုက်သည်..။
“မထား ဖင်လိုးချင်တယ် ခံဖူးလား”
လေသံလေးများနှင့် ပြောဆိုနေကြသည်။ သုတ်ရည်များကြောင့် ချောနေသောလီးမှာ ဆီထည့်စရာမလို.. စအိုဝလေးကို ထောက်၍ ဖိချလိုက်သည်..။ ဒစ်ထိပ်ဝင်သွားရာ မထား ခါးလေး တွန့်သွားသည်..။ ပထမဆုံး ဖင်ခံရသဖြင့် အရသာတမျိုး ရလေသည်..။ ပုံမှန်လေး လိုးနေ၍ ထပ်ပြီးချင်လာသည်..။ မင်းမင်း အလုပ်ရှုပ်နေသည်..။ ဖင်းထဲလိုးလိုက် အဖုတ်ထဲလိုးလိုက်နှင့်ပေါ့..။
“နင့်အရည်တွေ အပြင်မထုတ်ပါနဲ့နော်.. အဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်ပေးပါ.. ငါ နင့်ကလေး လိုချင်တယ်”
မင်းမင်း သဘောတူလိုက်သည်..။ နောက်ဆုံးတစ်ချီကို အဖုတ်ထဲ သီးသန့်လိုးပြီး ပြီးချလိုက်တော့သည်…။ သုတ်ရည်ပူပူလေးများ အဖုတ်ထဲဝင်လာတဲ့ အရသာက အင်မတန်းကောင်းလွန်း၍ မထားလည်း နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ပြီးလေတော့သည်…။
ဒီလိုနှင့် မင်းမင်းနှင့်မထား ကြုံသလို ခိုးစားဖြစ်ကြသည်…။ လအနည်းငယ်အကြာ မထား ကိုယ်ဝန်ရှိလာသည်..။ ကျော်ကြီးကလေးလား.. မင်းမင်းကလေးလား မသိရပေ..။ မိန်းကလေး မွေးလာသည်…။ နာမည်လေးက..”သီရီမင်းကျော်” တဲ့..။ မထား မှည့်ပေးတာဟု သိရသည်..။
မင်းမင်းမှာ အလုပ်ကြိုးစားစုဆောင်းပြီး နိုင်ငံခြားထွက်ကာ အလုပ်လုပ်တော့သည်..။ ကျော်ကြီးမှာ ကလေးရပြီးနောက် အရက်ဖြတ်လိုက်ပြီး အလုပ်ကြိုးစားရာ ကိုယ်ပိုင်ကားနှင့်တိုက်နှင့် ကြီးပွားနေပြီး မထားမှာ စတိုးဆိုင်ကြီး ဖွင့်ထားလေသည်….။
အခုတော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရောက်လေပြီ..။ အချိန်ဆိုတာ ခဏလေးပါ…..။ အရာအားလုံး ပြောင်းလဲလာသလို… သီရိမင်းကျော် (ခေါ်) သီရိလေးမှာ.. အပျိုလေးပင် ဖြစ်လာလေတော့သည်…။
၂ဝ၂၀ ခုနှစ်သို့ ရောက်ခဲ့ပြီး.. မင်းမင်း.. အမေရိကန်သို့ ရောက်ရှိသည်မှာ နှစ်နှစ်ဆယ် ကြာခဲ့လေပြီ..။ မထားနှင့် ကိုကျော်ကြီးတို့မှာ သူနှင့်အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေများ ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး အဆက်အသွယ် မပြတ်ခဲ့ကြပါ…။ ဖေ့ဘွတ် မတ်ဆင်ဂျာနှင့် ဆက်သွယ်၍ ဗီဒီယို‌ကောများ ခေါ်သည့်အထိ အဆင့်တက်လာခဲ့သည်..။
မင်းမင်း အခုထိ စင်ဂယ်ဖြစ်သေးသည်..။ ထို့ကြောင့် တခါတလေ အရမ်းထန်လာရင်.. မထားနှင့် ဆက်စ်ချက်ကြသည်..။ မထား၏ ကိုယ်တုံးလုံးပုံများမှာ မင်းမင်း ဖုန်းထဲ အများကြီးရှိလေသည်..။
“မထား အားရင် ဗီဒီယိုကော ခေါ်ပါ.. ဒီည ထုချင်လို့”
မထား ကလေးတစ်ယောက်အမေ ဆိုပေမဲ့ နန်းမွေစံလို ဘော်ဒီမျိုး ကိတ်လာလေသည်..။ ဒီနေ့လည် မထား အိမ်မှာ လူရှင်းသည်..။ ထို့ကြောင့် မင်းမင်းဆီ ဗီဒီယိုကော ခေါ်လေသည်..။ ဖုန်းကို ကုတင်ခြေရင်း မှန်တင်ခုံရှေ့ ထောင်လိုက်ပြီး.. အဝတ်များ ချွတ်ထားလေသည်…။
မင်းမင်း.. ဗီဒီရိုကော ကိုင်လိုက်သည်…။ သူလည်း ကုတင်ပေါ်မှာ လီးကို ထုတ်ကိုင်လိုက်ပြီး..
“ထားရေ.. ခရမ်းသီးနဲ့ ထိုးပြပါ”
“ဟဲ့.. ငါ လီးအတု ဝယ်ထားတာရပြီ အဲ့ဒါနဲ့ လုပ်ပြမယ်”
“ဝိုး.. ရှယ်ပဲ.. ပြီးအောင်လုပ်ပြနော်”
မထား လီးအတုကို အဆင်သင့်ကိုင်လိုက်ပြီး ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ပြလေသည်..။
“အွင်း.. ကိုမင်းရယ်… ပြန်လာပြီး လိုးပါတော့..”
“ထားရေ.. ကို့လီးကြီး ကြည့်ပါဦး.. အရမ်းကြီးနေပြီ..”
မင်းမင်း.. ဂွင်းထုရင်သုံးသော ဂျယ်ကို လီးပေါ်သုတ်လိုက်ပြီး ထုပါတော့သည်..။ မထား လီးအတုကို.. ကုတင်ပေါ် ထောင်လိုက်ပြီး အပေါ်မှ တက်ဆောင့်ရင်း….
“အား.. ကိုမင်း လိုးပါ.. လိုးပါ…”
စိတ်အတွင်း မင်းမင်း လိုးသလိုခံစားပြီး.. ဖုန်းအတွင်းမှ မင်းမင်း ထုပြတာကြည့်ပြီး အော်ပြနေတော့သည်…။ ထို့နောက် လီးကိုထုတ်၍ ဖုန်းဘက်သို့ ဖင်ကိုလှည့်ကုန်းကာ လီးကို လက်ပြန်ကိုင်၍.. အဖုတ်ကြီးကြား အဝင်အထွက်မှန်မှန် လိုးပြတော့သည်…။
“ထားရေ.. ဖင်လိုးပြပါ… အရမ်းကောင်းနေပြီ…”
မထား အဖုတ်တွင်းမှထွက်သော အရည်များကို ဖင်စအိုဝမှာ သုတ်လိုက်ပြီး.. လီးတုကို ဖင်ထဲထည့်လေသည်…။ မင်းမင်း ဖင်လိုးရတာ အရမ်းကြိုက်သည်။ အဖုတ်မှာ ကြာကြာလိုးရင် ချောင်လာ၍ အရသာပေါ့သည်..။ ဖင်စအိုမှာ မည့်သည့်အချိန်မဆို ကြပ်နေပြီး.. စုပ်အားပိုကောင်း၍ လီးပိုကြီးသလို သုတ်ထွက် အရမ်းကောင်းလေသည်…။
မထား အဖုတ်မှာ ဟစိစိနှင့် အရည်များ တစက်စက် ကျနေပြီ… ဖင်ထဲ လီးတုနှင့် လိုးပြသလို လက်ချောင်းသုံးချောင်းမှာ အဖုတ်ထဲသွင်းကာ လိုးရင်း ပြီးသွားတော့သည်..။ ထိုမြင်ကွင်းကြောင့် မင်းမင်း အထွတ်အထိတ်ရောက်ပြီး.. သုတ်ရည်များ ပန်းထွက်ပါတော့သည်…။
“ထားရေ.. ကိုယ်ပြန်လာတော့မယ်.. ထားအိမ်မှာ နေမှာနော် စီစဉ်ပေးထား..”
“အိုကေ.. ကိုမင်းရေ.. လုပ်ထားမယ်”
“ထားရေ.. သမီးပုံလေးတွေ ထပ်ပို့ထားဦး.. သတိရလို့..”
မထား ဖုန်းမှ သီရိပုံများကို ပို့လိုက်သည်..။ သီရိမင်းကျော်မှာ အခု အသက် ၂၄ အရွယ် အပျိုမလေးပါ..။ မထား ငယ်စဉ်ကလို ခါးသေးရင်ချီပြီး ဖြူဖြူအိအိလေး ဖြစ်သည်…။ ကျော်ကြီးနှင့် မင်းမင်းတို့ လိုးပြီးနောက်ပိုင်း ကိုယ်ဝန်ရလာပြီး မွေးထားတာ ဖြစ်သည်..။ သီရိမျက်နှာမှာ မထားနှင့် တူနေ၍ အဖေက ဘယ်သူမှန်း မသိရတော့ပေ..။ အခုတော့ အပျိုမ ဖားဖားကြီး ဖြစ်နေလေပြီ..။
မင်းမင်းမှာ သီရိပုံလေးတွေကို ကြည့်ရင်း.. လိုးချင်နေမိသည်..။ မထား နားလည်ပါသည်..။ မင်းမင်း အခုထိ အိမ်ထောင်မပြုပဲ.. မိမိတို့ မိသားစုအတွက် အများကြီး ကူညီခဲ့သူဖြစ်သည်..။
“ထား.. ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် သီရိလေးကို လက်ထပ်ချင်တယ်”
ဟု.. မင်းမင်း ပြောဖူးသည်..။ ဖိတ်ချင်းဖိတ် ကိုယ့်အိပ်ထဲ ပြန်ဖိတ်တာ အကောင်းဆုံးပါ..။ မင်းမင်းအသက် ၄၅ နှစ်ရှိပြီ.. သီရိက ၂၄ နှစ်။ အခုခေတ်က ဦးနှင့်သမီးတွေခေတ်..။
မင်းမင်းအရင်လို အိမ်ငှါးငမွဲ မဟုတ်တော့..။ အမေရိကန်နိုင်ငံသား သူဌေးတစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီ။ သမီးလေး သဘောတူရင် စီစဉ်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါ..။
သီရိသည် ဦးမင်းနှင့် ဖေ့ဘွတ်မှာ သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ လူချင်းတော့ မတွေ့ဖူးပါ..။ မိဘနှစ်ပါး၏ အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေဖြစ်သလို သူတို့မိသားစုနှင့် ဆွေမျိုးလို ဖြစ်နေသည်..။ သူမပုံလေးတွေကို အသဲလေးတွေပေးပြီး ကောမန့်အမြဲ ပေးတတ်သဖြင့် ကျေနပ်နေမိသည်..။ အခု သူအလည်လာပြီး အိမ်မှာနေမှာဆိုတော့ သီရိ ရင်တွေခုန်မိသည်..။ ဦးနဲ့သမီး ဇာတ်လမ်းလေး စကြစို့..။
ကိုကျော်ကြီး စပါယ်ယာအလုပ် မလုပ်တော့ပါ..။ သမီးလေး သီရိကို မွေးပြီးနောက်.. မင်းမင်း ငွေကြေးအကူအညီနှင့် ကုန်စုံဆိုင်ဖွင့်သည်။ ထိုမှတဆင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာ စတိုးဆိုင်ကြီး ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီး.. ယခု သူဌေးကျော်ကြီး ဖြစ်နေလေပြီ..။ ကျော်ကြီးရိုးသားလွန်း၍ မထားနှင့်မင်းမင်း ငြိစွန်းတာ မသိခဲ့ပေ…။
ဒီနေ့ မင်းမင်း အလည်ပြန်လာမည်..။ မထားနှင့်သမီး သွားကြိုကြသည်..။ ကျော်ကြီးမှာ ဆိုင်ထိုင်ရင်း ကျန်ခဲ့သည်…။ မထားနှင့်သီရိ လေဆိပ်ရောက်နေသည်..။ မကြာခင် လေယာဉ်ဆိုက်လာပြီး ဆင်းသက်လာသော ခရီးသည်များအကြား မင်းမင်းကို တွေ့လိုက်၍ မထား အရမ်းပျော်သွားသည်…။
ခရီးကြိုသူများကြား ပါတိတ်ဝမ်းဆက်နှင့် လှပနေသော မထားနှင့် သီရိကို မင်းမင်း တွေ့လိုက်သည်။ သားအမိဟု မထင်ရအောင် နုပျိုနေသော မထားနှင့် မြန်မာဆန်ဆန် ခါးသေးရင်ချီ တင်ကားနေသော သီရိမှာ အပြုံးများဖြင့် ဆီးကြိုနေသည်…။
“မထားရယ် လှနေလိုက်တာ.. သမီးလေးကလည်း အမေတူလေးနော်.. နင်ငယ်ငယ်က အတိုင်းပဲ.. ကိတ်နေလိုက်တာ”
မင်းမင်းမျက်လုံးများ သီရိကိုယ်ပေါ်က မခွာတာ မထား မြင်ရ၍ မနာလို ဖြစ်ရပြန်သည်..။
“ကိုမင်း အိမ်ပြန်ကြစို့ မိုးချုပ်တော့မယ်”
သီရိလေးမှာ မင်းမင်း ခရီးသွားအိတ်ကို ဆွဲယူပြီး အရှေ့မှ အရင်သွားလိုက်သည်..။ သီရိနောက်ပိုင်းအလှ တင်သားအိအိကြီးများမှာ အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် ဖွံထွားနေကြသည်…။ “ရအောင် လိုးမည်” ဟု စိတ်ထဲတွေးရင်း….
”မထား.. ငါ နှစ်လပဲ ဗီဇာ ခွင့်ရတာ.. ငါ့ကို မြန်မာပြည့်အနှံ့ အလည်ပို့ပေးနော်”
“အေးပါ.. မနက်ဖြန် ချောင်းသာ အရင်သွားကြတာပေါ့”
“နင် အရင်လို လှနေတုန်းပဲ သိလား.. ပြီးတော့ ပိုကိတ်လာတယ်.. အားရပါးရ လိုးချင်တယ်”
မထား ပြုံးနေလိုက်သည်…။ မိနစ် ၃ဝ အကြာ နှစ်ထပ်တိုက်လေး တစ်ခုသို့ ရောက်လာသည်..။ သီရိ အပေါ်ထပ်သို့ တက်သွားပြီး…
“အမေ သမီးခေါင်းမူးနေလို့ ခဏအိပ်မယ်နော်..”
“အေး.. အေး.. လာ ကိုမင်းနေဖို့ အခန်းပြမယ်”
အိမ်အောက်ထပ် အခန်းနှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခန်းက မထားတို့ လင်မယားအခန်း.. ဘေးချင်းကပ် အလွတ်ခန်းတစ်ခုမှာ မင်းမင်းနေရန် စီစဉ်ထားလေသည်..။ ဦးကျော် ည ၉ နာရီမှ ဆိုင်ပိတ် ပြန်လာမည် ဖြစ်သည်။ အခုမှ ၇ နာရီသာ ရှိသေးသည်..။
အခန်းတွင်း ရောက်သည်နှင့် မင်းမင်း တံခါးကို လော့ချလိုက်ပြီး မထားကို သိုင်းဖက်ကာ အငမ်းမရ နမ်းလေသည်…။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခွဲခွာနေရသော ချစ်သူလင်ငယ်ရဲ့ လီးကို တောင်းတနေတာ ကြာလှပေပြီ..။ အဝတ်များကို အမြန်ချွတ်၍ နှူးနပ်မနေတော့ပဲ ကုတင်စောင်းမှာပင် မထားကို မတင်၍ ပေါင်နှစ်လုံးမကာ.. လီးကို အဖုတ်ဝတေ့ပြီး လိုးချတော့သည်..။
“အား.. ဖြေးဖြေး.. နာတယ်ဟ.. ကြပ်လိုက်တာ..”
မထား ခံချင်တာပဲသိသည်။ ငယ်ငယ်ကလို အရည် သိပ်မထွက်တော့ပါ။ အသက် ၄၀ ကျော်ပြီ ဖြစ်သည်..။ မင်းမင်းလီးမှာ အမေရိကန်မှာ နေစဉ်က လီးကြီးရှည်ဆေး သုံးထား၍.. ၈ လက်မခန့် ရှိကာ.. လုံးပတ်မှာ.. ငရုတ်ကြည်ပွေ့လောက်ဖြစ်ပြီး မာထန်နေသည်..။
“ဗြစ် ဗြစ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ်…”
လဥနှင့်တင်ပါး ရိုက်သံများ ထွက်လာသည်။ အဖုတ်ကြီးမှာ လီးကို အတင်ညစ်နေ၍ လိုးလို့ ကောင်းလှသည်..။
“အား.. ကောင်းလာပြီ.. ဆောင့်ဆောင့်.. အမေ့.. အ့.. ကိုမင်း.. နို့စို့ပေးရင်းလိုး..”
မင်းမင်း နို့ကုန်းစို့ပြီး အရူးအမဲသားကျွေးသလို ဖြစ်နေသည်..။ မထားကို ဆွဲလှည့်ပြီး ကုတင်စောင်းမှာ မှောက်၍.. ပေါင်ကိုဖြဲကားကာ ဖင်လိုးပါတော့သည်…။
“အား.. ရှီး.. ဘွတ်ဘွတ်ဘွတ်..”
စအိုတွင်းလေများ ဆက်တိုက် ထွက်လာသည်..။ မထားခါးကိုဖိ၍.. ကော့လာသော ဖင်ကြီးကို ရမက်ထန်ထန်ကြည့်ပြီး.. ဆောင့်တော့သည်…။
သီရိ လေဆိပ်ကအပြန် ကားမူးလာပြီး အိပ်ချင်လာမိသည်..။ အိပ်ယာထဲ လှိမ့်နေရင်း သေးပေါက်ချင်လာသဖြင့် အောက်ထပ်ကို ဆင်းလာခဲ့သည်။ အမေနှင့် ဦးမင်းကို မတွေ့ရ…။ အိမ်သာရေချိုးခန်း၏ ဘေးအခန်းမှ ငြီးသံ ကြားရသဖြင့် ကပ်နားထောင်လိုက်ရာ.. မိမိ မိခင်ရဲ့ အသံနှင့် လိုးသံများ ကြားရတော့သည်..။
သီရိ ခေတ်လူငယ် အပျိုမ ဖြစ်သည်..။ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းများဆုံလျှင် ကာမအကြောင်း ပြောတတ်ကြသလို.. တခါတလေ အွန်လိုင်းမှ အောကားများလည်း ခိုးကြည့်ဖူးသည်..။ အခုကြားရသော အသံများမှာ အောကားအတွင်းမှ အသံများနှင့် တူနေသဖြင့် အခန်းတွင်း လိုးနေကြတာ သိလိုက်သည်..။
သီရိ သေးပေါက်ချင်စိတ်ပါ ပျောက်သွားပြီး အောကားအတွင်းမှ လိုးကွက်များ စိတ်ထဲပေါ်လာသလို အခန်းတွင်း ဘယ်လို လိုးနေမလဲတွေးရင်း.. အဖုတ်လေးကိုပွတ် နို့လေးကိုပွတ်၍.. တခါးနားကပ် နားထောင်လေသည်..။
“လိုး.. လိုး.. ဆောင့်လိုး.. ကိုမင်း.. ထားအရမ်းကောင်းနေပြီ…”
“ကြိုက်လား မထား.. လီးလာစုပ်ပေး.. ပြီးရင် ထားအကြိုက် အပေါ်ကဆောင့်…”
သီရိ တဏှာထန်ထန် စကားသံများ ကြားနေရ၍.. တကိုယ်လုံး ပူတက်လာသည်..။ အစိလေးကို ဖိချေကြည့်ပြီး ဆက်လက်ပွတ်နေမိရာ ဒူးကလေး ပျော့ခွေသွားပြီး စောက်ရည်များ ထွက်လာတော့သည်။
မထားမှာ အစုပ်ကောင်းလှ၍ မင်းမင်း သုတ်ရည်များ မထားပါးစပ်ထဲ ပန်းထည့်လိုက်သည်။ လီးမှာ ညိုးမသွားပါ.. မာထန်နေဆဲဖြစ်သည်..။ ကုတင်‌ပေါ် ပက်လက်လှန်ပေးရာ မထား အပေါ်မှ ဆောင့်တော့သည်…။
“အား.. အ့ အ့..”
မင်းမင်း အလိုက်သင့်လေး ကော့ပေးသဖြင့် လီးမှာတဆုံးထိဝင်ပြီး သားအိမ်ကိုပါ ထိမိသည်..။ သိပ်မကြာပါ မထား ပြီးသွားသည်…။
“ကိုမင်းရယ် ကောင်းလိုက်တာ.. မပြန်ခင် အဝလိုးပေးနော်…”
“အင်းပါ.. ထားရယ်… မနက်ဖြန် ချောင်းသာ သွားကြမယ်နော်.. သမီးကိုပါခေါ်ခဲ့”
သီရိ ခြေသံလေးဖော့ပြီး သေးသွားပေါက်ကာ.. အပေါ်သို့ ပြန်တက်သွားလေသည်….။ နောက်တနေ့.. အိမ်သားများ မနက်စာ စားရင်း ဆုံကြသည်..။
“ကိုကျော် ကျမတို့ ချောင်းသာ သွားမလို့ ရှင်လိုက်မလား”
“ငါမလိုက်အားဘူးလေ ဆိုင်ကတဖက်နဲ့ ဒီကောင်ကြီးကို နင်ပဲ လိုက်ပို့လိုက်ပါဟာ”
“ဟုတ် မေမေ.. လိုက်မယ်.. ဦးမင်း ကြိုက်ပါ့မလား”
သီရိ မသိသလို အထာနှင့် မေးလိုက်သည်..။
“ဟာ.. သမီးလိုက်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့.. ဦးမှာက သားသမီးမရှိ တစ်ယောက်ထဲ.. သမီးအဖြစ် မွေးစားဖို့ တွေးနေတာ… ရော့သမီး.. ဒါက သမီးအတွက် ဝယ်လာတာ..”
မင်းမင်း စပရိုက် အနေအထားနှင့် သူမအရှေ့ ဘူးလေးတစ်ခု လာချပေးသည်…။
အိုင်ဖုန်း ၁၁ ပရိုမက် ဖြစ်နေသည်..။ နောက်ဆုံးပေါ် ဖုန်းဖြစ်၍ အရမ်းပျော်သွားသည်..။
“ဟျောင့်.. သားရီး မင်းတူမကို အလိုမလိုက်နဲ့.. မင်းရှိတာ ကုန်သွားမယ်”
“ရပါတယ် ကိုကျော်.. ကျနော့်မှာ ပေးစရာ လူမှ မရှိတာ.. သီရိ စိတ်ချမ်းသာရင် ပြီးရော”
သီရိ သဘောပေါက်လိုက်သည်။ ဦးမင်း၏ အပေးကောင်းမှု ကူညီမှုများကြောင့် အမေ စွဲသွားတာ ဖြစ်ရမည်..။
မထား ကားလက်မှတ်ကို ဖုန်းဖြင့် လှမ်းမှာလိုက်ရာ သုံးစောင် နှစ်ခုံတွဲတစ်ခုနှင့် ရှေ့ခုံတစ်ခုရသည်..။
“ကဲ.. ကိုမင်းရေ.. သွားဖို့ပြင် လက်မှတ်ရပြီ.. သီရိ ယူစရာရှိတာ ယူတော့ သွားကြမယ်”
ညဘက်ထွက်သော ကားဖြစ်သည်..။ အဝေးပြေးကား အလည်ပိုင်းနှစ်ခုံမှာ သီရိက ပြတင်းပေါက်ဘက်ထိုင်သည်..။ မထားက ဘေးမှာထိုင်သည်..။ ကိုမင်း တိုင်ပတ်လေတော့သည်။ သူ့ဘေး ပြတင်းမှာ အဖွားကြီးတစ်ယောက်ထိုင်၍ အပြင်လေမရ ခေါင်းမူသလို ဖြစ်နေသည်..။
“မထားရေ.. နေရာလဲရအောင်ဟာ… ငါနဲ့ သီရိနဲ့ အတူထိုင်ပြီး.. ပြတင်းပေါက်ဘက် တစ်ယောက်တစ်လှည့် ချိန်းမယ်လေ.. ငါအသက်ရှူကြပ်လို့”
မထားက သဘောတူလိုက်ပြီး နေရာလဲပေးလေသည်..။ ကားမှာ ညဘက်မောင်းသဖြင့် အနည်းငယ် နှေးသည်..။ ရှေ့ခုံမှ.. မထား ငိုက်နေလေသည်..။ သီရိမှာ အသစ်ရသော အိုင်ဖုန်းနှင့် ရှုပ်နေသည်..။
“ဦး ကူညီပါဦး.. သမီး မလုပ်တတ်ဘူး..”
တရုတ်ဖုန်းသာ အမြဲကိုင်သဖြင့် အိုင်ဖုန်းစက်တင်ကို သူမ မသိပါ..။
“အေး.. ပေး.. သမီး..”
ဦးမင်း ဖုန်းစက်တင် အမျိုးမျိုး ပြင်နေသည်..။ သီရိမှာ သိချင်မိ၍ မင်းမင်းဘက် ခါးလှည့်ပြီး လိုက်ကြည့်နေသည်…။ သီရိရင်သား အိအိလေးမှာ မင်းမင်းလက်မောင်းကို ဖိပွတ်သလို ဖြစ်နေသည်…။ မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်၍ ပုဆိုးပြန်ဝတ်ထားပေမဲ့ အောက်ခံဝတ်တာ မကြိုက်သော မင်းမင်းမှာ သီရိနို့သားကြောင့် လီးတောင်လာတော့သည်..။ မင်းမင်း အချိန်ဆွဲရန် ဂွင်ဆင်လေသည်။
“အကောင့်ဖွင့်ရမယ် သမီးရဲ့… ဒါမှ လိုချင်တာ ဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့ရမှာ… သမီး လိုက်ကြည့်ထားနော်… ဦးလုပ်ပြမယ်”
“ဟုတ်ဦး.. တစ်ခုဆီပြနော်.. သမီးက မေ့တတ်တယ်”
ထိုသို့ပြောပြီး.. ခြေထောက်တစ်ဖက် ခုံပေါ်တင်ကာ မင်းမင်းဘက် ဘေးတိုက်လှည့်ထိုင်ပြီး ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို ကြည့်နေလိုက်သည်..။ ပုဆိုးက ပုံစ အောက်မှာ လီးက အမြောင်းလိုက် ပေါ်ထွက်ပြီး ထောင်လာသည်..။ အဝေးပြေးကားများမှာ ညအချိန်တွင် ခရီးသည်များ အိပ်လို့ရအောင် မီးကို ပိတ်ထားတတ်ကြသည်..။ ရုတ်တရက် ကားကွေ့လိုက်သည်..။
သီရိ ငိုက်ခနဲ ယိုင်သွားသဖြင့် လက်ထောက်လိုက်စဉ်.. မင်းမင်း ပေါင်နှင့်လီးပေါ် လက်က ရောက်လေသည်..။ ကံတရားက အဲ့လို..။ သီရိလက်က လီးပေါ်မှ ချက်ချင်းမဖယ်.. ခပ်နွေးနွေးလီးကြီးက မာကြောနေသည်..။ ပုဆိုးအပေါ်မှ ကိုင်မိသည်ဖြစ်၍.. လီး ဆိုဒ်ကို မမြင်ရပေမဲ့ ကြီးရှည်ထွားကြိုင်သော လီးမှန်း သိလိုက်သည်…။
မင်းမင်း ဖုန်းပွတ်နေရာမှ တစ်ချက် ထငြီးသည်..။
“ဦး ဆောရီးနော် ကားကွေ့လိုက်လို့.. ပြီးတော့ ဦးက အတွင်းခံလည်းမပါ..”
“ဟုတ်တယ် သမီး… ထိပ်အရမ်းနာပြီး အောင့်သွားတယ်.. ဦးဟာက ကြီးတော့ ဘောင်းဘီဝတ်ရင် ပူလို့ပါ”
မင်းမင်းလီးမှာ လက်ဖဝါးနုနုလေး ကိုင်ထား၍ တဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး ပါးပြင်းထောင်ထလာသည်။ မင်းမင်း နာချင်ဟန်ဆောင်၍ ငြီးပြနေသည်..။
“သမီးလည်း မလုပ်တတ်ဘူး.. အောင့်နေတာလား ..”
လီးကြီးမှာ တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေသဖြင့် သီရိလန့်ပြီး လွှတ်လိုက်သည်..။
“ဦးပြောပြမယ် သမီးလိုက်လုပ်ပါ.. ဦးက ဖုန်းဆက်တင် လုပ်ရဦးမယ်”
မင်းမင်း ထရပ်လိုက်ပြီး ခေါင်းပေါ် အိတ်ထားသော နေရာမှ ခရီးဆောင်အိတ်လေးကို ယူလိုက်ပြီး အတွင်းမှ တံဆိတ်မပါသော လက်ညှိုးအရွယ် ပုလင်းလေးကိုထုတ်၍ သီရိကို ပေးလိုက်သည်..။
မင်းမင်း ပြန်ထိုင်၍ ပုဆိုးပုံစကို ဖြည်ပေးလိုက်သည်..။
“အဲ့ဆီလေး လက်ထဲထည့်ပြီး ဦးဟာကို လိမ်းပေးပါ သက်သာလာမှာ.. အားကျွစ်ကျွစ်..”
သီရိ ကယောင်ကတန်းနှင့် ဆီကို လက်ထဲထည့်၍ ပုဆိုးအောက်မှ လီးကြီးကို ဆီသုတ်လိုက်သည်..။ ထိုဆီမှာ မင်းမင်း အမြဲသုံးနေကြ လီးကြီးသန်ဆေး ဖြစ်သည်..။ သီရိမှာ လီးအတွေ့အကြုံမရှိ၍ ဘာမှ နားမလည်ပေ..။ အောကား ကြည့်ဖူးသော်လည်း လိုးကြတာပဲ သိသည်..။ လီးနာသွားတာ မကြည့်ဖူးပေ….။ လီးမာဆက်ကား ကြည့်ဖူးရင် သိမှာဖြစ်သည်။
“သမီး နည်းနည်းလေးညစ်ပြီး ပရုတ်ဆီ လိမ်းသလို လုပ်ပါနော်.. ဦး ဖုန်းထဲ လိုတာတွေ ဒေါင်းလုပ်ရဦးမယ်”
သီရိ ဘာမှ မပြောတော့ပါ။ တကိုယ်လုံး ပူလာသလိုဖြစ်ပြီး.. စောက်ပတ်အတွင်း ယားလာတာပဲ သိတော့သည်။
ဦးမင်း ဘေးလူများ မမြင်အောင် ခြေထောက်တချောင်း ခုံပေါ်တင်၍ ထောင်ကွယ်ထားလိုက်သည်..။ လီးမှာ ပူလာသဖြင့် ပုဆိုးကို ဖြေလျှော့ကာ လီးကို ထုတ်လိုက်တော့သည်..။ လီးထိပ်ဖူးဒစ်ကြီးမှာ နီညိုရောင်ကြီးနှင့် အရည်ကြည်လေးများပင် ထွက်နေသည်..။ သူမ ယခု ဂွင်းထုပေးနေမှန်းမသိ အထက်အောက် ပွတ်ဆွဲနေသည်..။
ဦးမင်းမင်း ဖုန်းကို မဲကြည့်နေသဖြင့် သူမရဲ့ လက်တစ်ဖက်က စောက်ပတ်လေးဆီ အလိုလိုရောက်၍ ပွတ်နေသည်..။
“သက်သာတော့မယ် သမီးရေ.. ကျေးဇူးပါ”
“သမီးအခု ယားနေတယ် မဟုတ်လား..”
“လာ ဦးလုပ်ပေးမယ် အပြန်အလှန်ပေါ့နော်..”
စကားဆုံးသည်နှင့် လက်တဖက်က လျင်မြန်စွာ စောက်ပတ်ဆီ ရောက်သွားသည်..။ အစိရှိရာ နေရာသို့စမ်း၍.. ဖိပွတ်ပေးလိုက်ရာ.. သီရိ… အင်းခနဲ.. တွန့်သွားပြီး.. မင်းမင်းပုခုံးပေါ် မှီချလိုက်သည်…။ အခြေအနေ ကောင်းလေပြီ…။ သီရိ နှုတ်ခမ်းဖူးလေးကို ဆွဲနမ်းပစ်လိုက်ပြီး.. လီးကိုင်ထားသော သူမလက်ကို အထက်အောက် လုပ်စေသည်…။
“ချစ်တယ် သမီးရယ်.. လက်ထပ်ပါရစေနော်”
သူမ မျက်လုံးကလေးမှေးပီး ခေါင်းမော့ပေးသည်..။ လုပ်ချင်တာလုပ်ပါ ဆိုတဲ့ သဘော…။ လီးထိပ်မှာ အရည်လေးများ အဆက်မပြတ် ထွက်နေ၍ ချောမွတ်နေလေသည်..။
“သမီးရယ်.. ဦးဟာ မြန်မြန်သက်သာအောင် စုပ်ပေးပါလား”
“ဟာ.. ဦးကလည်း.. လူညာကြီး.. မစုပ်ချင်ဘူး.. ဆီတွေနဲ့..”
“ဆီက ခြောက်သွားပြီ သမီးရဲ့… အဲ့တာ.. သုတ်ရည်ကြည်လို့ ခေါ်တယ်.. သမီး အဖုတ်လေးလည်း အရေထွက်တယ် မဟုတ်လား… အတူတူပဲလေ.. စုပ်ပေးနော်”
သီရိ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ။ ဦးအလိုကျ လုပ်ပေးချင်လာသည်..။ အဲ့ဒါ.. အချစ်လား..။ မေမေ.. အရမ်းကြိုက် အရမ်းကောင်းပါတယ်လို့.. အော်ဟစ် အလိုးခံတာ ကြားရပြီးကတည်းက.. သူမ.. မေမေ့ကို မနာလို ဖြစ်မိခဲ့သည်..။ အခုတော့ အဲ့လီးကြီးကို သူပိုင်ရတော့မည်..။
“ခွင့်လွှတ်ပါ မေမေ.. သမီး.. ဦးကို ချစ်မိပြီ..”
သီရိ မျက်လုံးကလေးကို မှိတ်လိုက်ပြီး.. ဦးရဲ့လီးကို အသာလေး ငုံစို့ပေးလိုက်သည်…။
မင်းမင်းလောက် ပျော်နေသောသူ.. ရှိမယ်မထင်ပါ..။ နှစ်ပေါင်းများစွာ.. မထား၏ တိတ်တိတ်ပုန်း လင်ငယ်လို သစ္စာရှိစွာ ချစ်ခဲ့သည်..။ သီရိလေးကို စမြင်ကထည်းက မထားရဲ့ ကိုယ်ပွားလေးလို ချစ်မိခဲ့ပြန်သည်..။ သစ္စာရှိခြင်း တန်ဖိုးကို သူပြန်ရလေသည်..။
ဦးမင်းရဲ့ လရည်တွေ သီရိအာဂေါင်ထဲ တိုးဝင်လာသည်..။ သီရိ ထွေးမထုတ်ရက်ပဲ မျိုချလိုက်မိသည်..။
မထား အစောကြီးကတည်းက နိုးနေပါသည်။ မင်းမင်း သူ့သမီးကို နမ်းလိုက်စဉ်ကပေါ့။ အိမ်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ရှေ့ခုံနှစ်ခုကြားလေးမှ ချောင်းကြည့်နေခဲ့သည်..။ သီရိ လီးစုပ်ပေးသည် အထိပေါ့..။
မထား မျက်ရည်ဝဲမိလေသည်..။ ပီတိ မျက်ရည်ပါ..။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော လီးကြီးကို သမီးဆီ အမွေးပေးလိုက်ရ၍ နှမြောသလို သမီးဘဝအတွက် စိတ်ချရပါပြီ..။
ချောင်းသာသို့ ရောက်လေပြီ… သုံးယောက်သား ပျော်ရွှင်စွာ လည်ပတ်ခဲ့ကြပြီး အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့သည်..။
“မင်းမင်း.. နင် သီရိကို လက်ထပ်ပြီးရင် ငါ့ကို မေ့သွားမှာလား”
“ဟာ မဟုတ်တာ နင်က ငါ့အချစ်ဦးလေဟာ”
အလည်ဗီဇာ နှစ်လမပြည့်ခင် မင်္ဂလာပွဲလေး အကျဥ်းချုံး လုပ်လိုက်သည်..။ မင်္ဂလာဦးည သာယာပေစွ…။ သီရိမှာ အစွမ်းကုန် လှနေလေသည်..။ မင်္ဂလာ ကုတင်ဘေးမှာ ခေါင်းလေးငုံ့ပီး ရှက်နေသည်..။
မင်းမင်း မင်္ဂလာဝတ်စုံကို ချွတ်ချလိုက်သည်..။ သီရိလေးကို ပက်လက်လှန်ကာ.. ပါကင်အဖုတ်လေးကို နမ်းရှိုက်လိုက်သည်။ လျှာကြမ်းကြီးဖြင့် အဖုတ်ကွဲတလျှောက် ယက်ချလိုက်ရာ သီရိ နတ်ပြည်ရောက်သလို ခံစားနေရသည်..။ ပန်းရောင် နို့သီးခေါင်းလေးကို ငုံစို့ပေးပြန်သည်…။ ထို့နောက် နှုတ်ခမ်းလေးကို ကစ်ဆင်ရိုက်ပြီး.. အမွေးနုလေးအောက် ရှက်ရွံကာ စိနေသော အဖုတ်လေးကို လီးမာကြီးနဲ့ လိုးချလိုက်ပါတော့သည်..။
“ဗြစ် ဒုတ် အား….”
“ဦး.. သမီးကို.. ပစ်မသွားနဲ့နော်”
ဟု ပြောရင်း မင်းမင်းကို တင်းကြပ်စွာ ဖက်လိုက်လေတော့သည်။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 23,221